Tuchel Oo Qarka U Saaran Fulinta Howlgal Aan Macquul Ahayn (Mission-Impossible) – Garsoore Sports
Tuchel Oo Qarka…
Riyada Chelsea ee ah inay ku dhammeysato mid kamid ah afarta kaalimood ee ugu sarreysa horyaalka Ingiriiska ayaa laga yaabaa inay aheyd mid aad u fog markii tababare Thomas Tuchel la magacaabayay laakiin, mahaddii kaddib guushii ay ka gaareen Leicester waxay ku dhow yihiin iney ka dhabeeyaan riyadaas.
Chelsea ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Leicester City habeenkii lasoo dhaafay kulan muhiim u ahaa naadiga si ay u xaqiijiyaan usoo bixitaankooda afarta sare ee Premier League-ga.
Kaddib natiijooyin isku-dhafan oo ay gaareen kooxda macalin Tuchel, Blues ayaa ku soo laabatay wadada toosan si ay ugusoo baxdo tartanka Champions League-ga ololaha soo aadan.
Blues ayaa guuldarro ka soo gaaray kooxda ay isku magaalada yihiin ee Arsenal kulan ka tirsanaa horyaalka PL-ga kahor inta aanay is wajihin Leicester City oo kaga guulleeysatay finalka FA Cup-ga. tababaraha Blues Thomas Tuchel ayaa kooxda kusoo celiyay mar kale wadada guusha waxana uu haatan ku faani karaa inuu kooxda ka qaadaay 10aad markii uu la wareegay dhammaadka bishii Janaayo waxaana uu haatan kooxda gaarsiiyay kaalinta seddexaad ee miiska kala-sarraynta iyadoo kooxda ay haatan u harsantahay inay cayaaraan hal kulan oo horyaalka kahor inta aanay diirrada saarun finalka Champions League oo ay Manchester City wada kulmayaan.
Inuu badbaadiyo xilli ciyaareedka kooxda kuna soo celiyo kaalmaha ugu sarreeya ee miiska kala-sarraynta ayaa waxay aheyd mudnaanta koowaad ee Tuchel markii loo magacaabayay beddelka halyeeyga kooxda Frank Lampard. Taasi waxay laheyd culeys badan waqtigaas laakiin 18 guul, lix barbarro iyo afar guuldarro guud ahaan ayaa Chelsea gacanta ka dhigtay mid xilli-cayaareedkeedu guulleeystay marka laga soo tago CL-ga.
Blues ayaa leh tayo aad u tiro badan, laakiin waxaa ka maqan xiddigo waaweyn, waxayna soo bandhigtay koox mideysan. Dhowr ciyaartoy ayaa kaalin muhiim ah ka qaatay shaxda macalin Tuchel si ay u kasbadaan doorar waaweyn iyada oo goolashii ay dhaliyeeen cayaartooyda Rudiger iyo Jorgin kulankii xalay ay ahayd kuwo aad muhiim u ah marka loo eego bandhigyadii liitay ay soo bandhigayeen markii uu kooxda joogay tababare Lampard oo ay la qasan waayeen maskax-cayaareedkiisa.
Cayaartooyda kale, sida Mason Mount, waxay sii wadaan inay kasbadaan doorar caan ah sidii ay ku ahaayeen macalinkii isaga ka horreeyay. Kaddib markii uu helay abbaalmarinta ciyaaryahanka xilli ciyaareedka ee Chelsea, Mount wuxuu soo koobay rabitaanka kooxdiisa inay ku guuleystaan iyagoo ay daawanayaan 8,000 taageerayaal ah oo ku soo laabtay garoonka kaddib markii isbeddel lagu sameeyay borotokoolka UK ee ‘Covid-19’.
Arsenal Oo Heshay Saxiixii Ugu Horreeyay Xagaaga